I-Dakinis: Oodadekazi beNkululeko kwiBuddhism
I-Dakinis: Iimpawu zeBhinqa zoKhuseleko
I-Goers Sky, Abakhuseli, ootitshala
Phakathi kweemfundiso zobulumko zeBajrayana Buddhism zikhumbuza ezininzi ukuba zingadukiswa ngokubonakala. Yintoni enokubonakala iyethusa kwaye ingenangqungquthela ayikho into embi, kodwa inokuthi ibe khona inzuzo yethu. Akukho nto ibonisa le migaqo engcono kune-dakinis.
I- dakini ibonakaliso lwamandla okukhulula kumfazi wesimo. Ngamanye amaxesha bahle, kwaye ngamanye amaxesha banomsindo kwaye bafihlakele kwaye bahlotshiswe ngeengqayi.
Ngenxa yokuba bamele ukukhululwa bavame ukubonakaliswa beze kwaye badansa. Igama lesiTibetan elithi dakini li- khandroma, elithetha "i-skyerer".
KwiBuddhist tantra , i-iconic dakinis inceda ukuvuselela amandla enzululwazi, ukuguqula ingqondo engcolileyo , okanye i-klesas , ukuba ube nolwazi olukhanyisiweyo. E-Vajrayana iconography prajna , ububulumko buboniswa ngokugqithiseleyo njengomgaqo wesetyhini kunye ne- upaya , okanye isakhono, umgaqo wesintu. Ngaloo ndlela inkululeko yowesetyhini i-dakini kukungenamkhawulo we- sunyata , ukungabi nalutho, okuphefumlelweyo kobulumko.
Ukuhlonela i-dakinis kubonakala ngathi yavela kuqala eIndiya ngexesha elithile phakathi kwekhulu le-10 ne-12. I-dakinis yasekuqaleni yayingaba yintsebenziswano yabasetyhini aboniswe kwimifanekiso ye-yab-yum . Ngexesha elifanayo, i-dakinis nayo yabonakala ngobugcisa bamaHindu kunye namabali, okokuqala njengomoya obi nobutyebi. Kodwa kwakungaphakathi kweBuddhist tantra leyo idakinis yaphuhliswa ibe yintlanzi yeengcambu ezinamandla ezikhululekileyo.
Inkcubeko yedakini yadluliselwa esuka eIndiya ukuya eTibet, kwaye namhlanje i-dakinis inxulumene kakhulu neBuddhism yaseTibet . I-Dakinis nayo ifumaneka kwi-Japanese Shingon Buddhism , apho idibene khona. Kwimbali yaseJapan, izimpungushe zinemihlaba emininzi kwaye zingathatha inxaxheba yabasetyhini babantu.
I-Dakinis inokukhanyiswa okanye ingakhanywanga. I-dakini engakhange ikhanywe ngamanye amaxesha ibizwa ngokuthi "ihlabathi" idakini. I-dakini yehlabathi isabanjwe kumjikelezo we- samsara kwaye ingabonakalisa njengoluhlobo lwe-trickster. Kodwa ininzi yexesha xa sithetha nge-dakinis, sithetha ngabantu abakhanyisiwe, ababizwa nangokuthi "ubulumko" dakinis ..
I-Dakinis idlala indima ehlukeneyo e-Vajrayana kwaye iyakwazi ukuchongwa ngeendlela ezininzi, kodwa ngokuqhelekileyo ihlelwa kwiiklasi ezine ezinkulu. Ezi zine ziyimfihlo , zangaphakathi , zangaphandle , nangaphandle-zangaphandle.
Kwinqanaba elifihlakeleyo, i-dakini ibonakaliso lwengqondo efihlakeleyo engumntu ovelele kakhulu kwi-tantra yoga. Kwinqanaba elingaphakathi, ungumbono wokucamngca okanye i- yidam , ibonakalisa ubunjani obunzulu bonyango. I-dakini yangaphandle ibonakalisa njengomzimba wenyama, onokuthi ube ngumzimba wengcali oye wazibona nje ngokuba nguye, njengokuba ezinye izibini zizincibilika. Kwaye i-dakini yangaphandle idakini kwisimo somntu, mhlawumbi utitshala okanye i-yogini.
I-Dakinis ikwahlulwa ngokwemizalwane emihlanu yakwaBuddha, eboniswa yi- Five Dhyani Buddha . Kwaye maxa wambi badibaniswa nale miba emithathu yeTrikaya.
Nangona kunjalo, ukukhetha i-icakicak dakinis kwisigaba esiqinileyo kukuphosa. Ngaphezu kwanoma yini enye i-dakinis ibonisa amandla kunye namandla. Ziyigunya elenza inguqu. Ziyakwazi ukubonakalisa ngeendlela ezininzi, kubandakanyeka ngokwakho. Banobukrakra, kwaye besoloko bekwesaba, kwaye abavumelani neemfuno.
Kwizobugcisa zaseNtshona, izinto eziqhelekileyo ezinobomi zibonakaliswa njengezinto ezintle kwaye zibi, kodwa ubugcisa baseAsia abuyithobeli rhoqo loo mzekelo. Abalinganiswa abaninzi obushushu obuboniswa kubugcisa beBuddhist, kubandakanywa nobuthixo obukrakra , ngokuqhelekileyo ngabakhuseli kunye nootitshala. Ukubonakala kwazo kukubonakalisa amandla kunye nokugqithisa, kodwa kungekhona ukuxhatshazwa.
Iimpawu ezinxulumene nezidalwa ezinomsindo zidibanisa umbonisi ongabonwanga. Ngokomzekelo, xa idakini iboniswa ukudansa kwisidumbu, isidumbu asibhekiseli ukufa kodwa kunokungazi kunye ne-ego.
Amanani amanqaku amaninzi angabonakala kwimiba yobomi noxolo. Ngokomzekelo, ngokuqhelekileyo uTara , i-archetype yemfesane, ngamanye amaxesha ubonakalisa njengo-Black Tara, onokufana nomnyama, udansa dakini kumfanekiso ongentla. Umsebenzi we-Black Tara ukukhusela ububi, ungabangeli.
Ngobukrakra babo obubonakalayo dakinis bafana ne-dharmapalas, abasemagqabeni aseTibet bahlala beedemon abaguqukela eBuddhism baza baba ngabakhuseli be-dharma. I-dharmapala iMahakala yindlela enomsindo ka- Avalokiteshvara, i-Bodhisattva yeNceba . Elinye inqununu dharmapala onomfazi, uPalden Lhamo , udla ngokubizwa ngokuba yi-dakini.
Omnye waseDaginis oPhambili
I-dakini Vajrayogini, onokubonakalisa nje ngezinye izidalwa ezininzi, enye yeyona dakinis yokuqala kwaye ithathwa njengomntu ophakamileyo waboothixo bonke noothixokazi . I-Narodakini yinto enobungozi obukhulu becala laseVajrayana. USimhamukha uyi-dakini eneengonyama kunye nokubonakaliswa kwabesifazane basePadmasambhava .
Kutheni Kutshintsho Kunzima Kangako
Qi (Chi): Iiifomu ezahlukeneyo ezisetyenziselwa kwi-Qigong ne-Chinese Medicine
Konke malunga noBukan Nanak
Inkolelo YaseYiputa Yendalo
Imibono kunye neHluccinations
Umbono Olungileyo-Indlela yeBuddhist Eightfold Way
"Les oiseaux dans la charmille" Iingoma, Ukuguqulelwa, iMbali, kunye Naphezulu
Ekubeni iVegans Ibulala Izilwanyana, Ngaba Akukho Njalo Njenge-Vegan?
Imbali yeSomf Music
Juz '26 yeQuran
Iingoma eziphezulu ze-Metal ezisemgangathweni zika-1980
I-Einstein Quotes kwi-Ethics and Morality
Indlela yokufumana iMisa yeTywala esuka kwiNinzi
Iintaka eziqhelekileyo ngesiMandarin
AbaMongameli baseMelika abanomdla
Isingeniso kwi-Architecture ye-Gothic Revival Architecture
Iindlela ezi-3 zokuvala uMnyaka weSikolo weziphumo zonyaka ozayo
Ingqwalasela ye-Political Conservatism
Ikhaya le-Zimmermans yaseNew Hampshire, i-Usonian Classic
I-ELL yeFund Students of Knowledge
Yintoni i-E-DV Ingxelo yokuQinisekiswa kweNdlela yoMqinisekiso?
Iintlobo zeMidlalo yamaKristu / yeVangeli
Amagama angamaNtaliyane aseNtaliyane: P
Ngubani owasungula iPlask Spank?